Namuhla, abantu bafuna ngezindlela ezahlukahlukene ukwenza imali online. Othile ngezokuvakasha ukusebenza, umuntu igagasi amasayithi, futhi abanye uhola ku ukubhejela ezemidlalo. Ngamunye izindlela e akhe khe hle, kodwa njengoba nohlobo yokugcina imali ke kukhona mass eziphikisanayo, umehluko wemisindo nemiqondo yamagama kanye izici. Ake nizame ukubaqonda.
Kuyini emakethe ye ukubhejela ezemidlalo?
Namuhla ungakwazi ukugembula njengoba obhuki Ukuhwebelana kwezemidlalo. Kufanele kuqondwe ukuthi izingosi ezinjalo akuzona ngubhuki. Ezemidlalo Exchange yesikhulumi lapho ubhuki kuyinto phakathi wabadlali abangene ukubheja. exchange Iphuzu liwukuthi i-oda okuza wabadlali isithakazelo.
Kungani abantu abalifaki kubhejwa?
Izizathu zokuthi kungani abantu baphendukela ukugembula, abaningi, ayinhloko kokuba:
Isifiso uhola. Eziningi zikholelwa ukuthi lokhu kuyindlela elula ukuthola imali, kodwa ngemva kokulahlekelwa amakhulu ama-dollar bayamangala lapho bethola ukuthi kwakungenjalo. Ngaphambi kokwenza ukubheja, kufanele uhlole ukuthi yini izici umdlalo, amasu ukubheja, ukucabanga kusengaphambili emizuzwini embalwa. Akuwona wonke umuntu amandla ukubala uzuza kanye ukulahlekelwa, yebo, uma ungeyena omunye lucky lucky. Umholo amazinga - ikakhulukazi ukubala.
Isikhathi ngokweqile. Kwenzeka ukuthi kukhona isikhathi esengeziwe bese usisebenzisa umane ndawo. Futhi kungani ungazami kubhejwa ezimbalwa ngesikhathi esifanayo hhayi sibheke ezimbalwa imidlalo?
ukheshe okweqile. Okufanele ukwenze nge le mali? Ungaya ku-exchange rate. Nokho, uma umdlali abanolwazi, hhayi yokuthi le mali ngeke nakakhulu.
Ukuthembela. abadlali abaningi abakwazi ukuyeka injabulo, futhi kukhona amazinga engapheli. Akusho avame ukuba isiphetho esihle, futhi umdlali okushiya yonke inhloko-dolobha. Ngakho-ke, njengoba kushiwo esigabeni sokuqala, kudinga ukubala.
Udinga ukukhumbula Ukubusa owodwa ezibalulekile: uma umgembuli kakhulu, musa ukulawula imizwa yabo, abangakwazi ukumisa ngesikhathi ke umdlalo nobhuki, kanye nemidlalo Ukuhwebelana ngokucacile engenzi ivumelane wena, ngoba wena engozini ukuchitha konke onakho, noma ngisho aze angene ezikweletini.
Kukhona amacala lapho umdlali ziyakuthanda ukuwina emuva ekulahlekeni, kuthatha imali bese belahlekelwa yizo.
Uyini umahluko kusuka exchange of ezemidlalo nokubheja ubhukhi?
Exchange of ukubhejela ezemidlalo enezinto eziningi umehluko kusuka ngubhuki, kodwa abaningi ukuba lokhu kwakusho yilezi imiqondo efanayo. Lokhu akusona isimanga, phela amazinga exchange lesiRotuma phezu gemblingovom emakethe. Umahluko omkhulu:
Esimweni sokuqala, ubhuki umi nje nomlomo kanye abadlali ukudlala ngokumelene nomunye esimweni sesibili badlala ngokumelene ubhuki.
I ezemidlalo nokubheja ukubaluleka okungu setha abadlali phezu Ukuhwebelana ukubheja - yena umnikazi wehhovisi.
Kungani ithandwa Ukuhwebelana ezemidlalo?
Amanani wokuguqulwa bathola okwandisa udumo ngokuyinhloko ngenxa yokuthi ukuthi abadlali mayelana nelungelo lokuzikhethela owakho, ngamunye inikeza ithuba ukunikela abahlanganyeli umcimbi ukubheja yakho nge bebutho ayebhekene nalo.
Eyokuqala ukubheja exchange, ubhuki oyedwa, labavulekela ngo-1999 - iyona Betfair, okuyinto futhi okwamanje iyona engcono kunazo.
Amanani wokuguqulwa avumela abasebenzisi futhi abe umdlali futhi ubhuki by ukushaja iphesenti ezithile ukusetshenziswa isayithi ngezilinganiso. Lapha, amathuba lokuwina ukwanda kakhulu, uma iqhathaniswa naso Ukuhwebelana ubhuki, kusukela ematfuba yokuthola isilinganiso okusezingeni eliphezulu, futhi uwine abadlali okuningi.
Ungase futhi uthole kabusha we okuza ngesikhathi umcimbi wezemidlalo, isimiso lapha kuyafana uma ukubhejela exchange isitokwe. Ngakho, okuza ukushintsha cishe ngomzuzwana, ukuze ukwazi ukuphatha ukuthengisa esigxotsheni yayo ngentengo ephakeme, lokhu ngeke ugweme ukwesaba ukulahlekelwa ekupheleni komdlalo.
NokuBheja exchange rate akukuniki amathemba lesenele ukuthengiselana kanye nomholo kuka emakethe yezemidlalo. Futhi abadlali bakhangwa hhayi kuphela kungenzeka nomholo, kodwa futhi ukukhetha. Ngakho, ngaphezu izinhlobo esezingeni ezemidlalo zokubheja ukwethekelisana ukunikela izinga "ngoba" futhi "ngokumelene." Kusho ukuthini lokhu? Ake sithi abaphikisi unikezele ukubheja yakhe okungavamile, uma uvumelana naye, wena ukugembula "ngoba" uma, kunalokho, bengavumelani - ukubeka ukubheja "ngokumelene" isiphakamiso.
Uma unesithakazelo nomholo nokubheja exchange, akufanele basheshe. Okokuqala, kudingeka ufunde zonke izici exchange rate imithetho, izinzuzo nezingozi. Ngisho noma wena ebona umdlali ngubhuki, ngeke ngokushesha kabusha vulela umdlalo emakethe yezemidlalo. Njengoba isisho sibonisa, kancane futhi izinze onqobayo - bahambe.
Ethandwa kakhulu Stock Exchange
Namuhla kukhona abaningi kangaka nokubheja Ukuhwebelana, futhi izinkundla zezemidlalo, nobhuki ngokuhlanganyela ezemidlalo ezinikeza abadlali izinto ezahlukene ongazikhetha ukugembula. Nokho, njengoba kunoma iyiphi indawo yezimpilo zethu, nalapha futhi, it has isilinganiso lalo. Amahhovisi ezithandwa kakhulu Betfair, BetDaq futhi WBX. Lawa masayithi kwabokuqala Akulesi niche, ngakho kufanele kubhekwe abaholi.
Betfair - legumbi
Le brand British, eyasungulwa ngo-1999 futhi is owned by Zemidlalo Exchange Ltd. Ubude yonyaka exchange rate inzuzo kwaba £ 393 million. I Betfair uye wathola trust abadlali futhi exchange ephephile futhi kuphela, alinikela kukhethwa imicimbi eminingi yezemidlalo, linikeza ezihlukahlukene amabhonasi kanye lobo bunzima okusezingeni eliphezulu.
BetDaq - ezinyathelweni Betfair
Kuyinto esincintisana eyinhloko Betfair Exchange. Umsunguli kuyinto Dermot Desmond owaphana 2001 wethula umsebenzi indawo. Ngo 2013 BetDaq wathenga ubhuki Ladbrokes. Exchange inikeza ezihlukahlukene imicimbi ukubheja, kodwa Betfair dlula oyimbangi kabanga kuze kube manje.
WBX - okunye Betfair
Ngo-2002, i-Exchange yasungulwa nguMalcolm Graham, abanikazi nazo Bet yenkampani Exchange Ltd futhi WBX Holding Plc., Ubani bakholelwa ukuthi imakethe kungaba enye enhle kakhulu Betfair. Bodumo ezemidlalo exchange sizila wamahhashi.
Njengoba wazi, uma nangengqondo ukuza umzamo noma yiliphi ibhizinisi ekuxazululeni izinkinga ezithile ke ungaphumelela. Futhi endabeni ezemidlalo Ukuhwebelana, nge efanele kanye cwaningo enemininingwane engafinyelelwa eziphakeme Amazing kule ndawo. Isibonelo esihle kungaba Bob vulgaris, owenza wonke umcebo wakhe kubhejwa.
Indlela eya ezindaweni eziphakeme
Bob vulgaris wahlanganyela kwezemidlalo ukubheja iminyaka engu-13. Wayengumuntu fan of NBA ukufana ngenjabulo abukwa nsuku umdlalo, kodwa kwakusekuningi ezinye izinto kusengaphambili. Ngemva kwesikhathi esithile, u-Anansi wathola umbono kanjani ukwenza lokhu eshisiwe. Eminyakeni 90 amazinga yayithandwa kakhulu cha, futhi Bob wakwazi beveza siqu Yokuwina isu yabo.
Nge iminyaka emihlanu babheja engosini ye umdlalo vulgaris ayengakwenza olulodwa ufake mqhudelwano-dollar ayizigidi ezingu-, ekwazi ukusithenga ukuqasha indlu Hollywood Hills 12 500 zamaRandi. Waphila impilo ukuthi ngabe ngiphuphe bonke abantu emhlabeni.
Nokho, ngemva kwesikhashana ehhovisi, isabelomali zazo waqala, ngaqala ukuqonda ukuthi ukuthi isebenza kanjani vulgaris, futhi yabukezwa imisebenzi yayo. Kusukela ngaleso sikhathi, Bob waqala ngokushesha ulahlekelwe esimweni saso, abakwazi ukuyeka hhayi ukugembula.
Ngakho, uma fan oshisekayo umdlalo ku ukubheja, qaphela futhi qinani ikhanda lakho, khona-ke uyokwazi ukwandisa inhloko-dolobha yabo, futhi okubaluleke - uyigcine.